Antsiranana : Niditra ny totakely nanararoatra ny grevy
vendredi, 08 janvier 2021 13:59
Sary ZP, sary nindramina
Nihitatra tany amin'ny grevin'ny mpianatry ny Onivesité n'Antsiranana ny fitokonanana nataon'ny mpianatra ENSET omaly alakamisy 07 janoary 2021.
Nifamotoana teny amin’ny campus ny mpianatra omaly hariva. Mitaky ny fisian'ny rano eny amin’ny toeram-ponenan’ny mpianatra izy ireo, ny hanatsarana ny trano izay tsizarizary. Niitatra hatrany amin’ny fitakiana ny fialan’ny filohan’ny oniversite ny tapak’ireo mpianatra io hariva io.
Nisy anefa ny sakoroka, nisy ny fisamborana mpianatra 16 ary dia nanararoatra ihany koa ireo totakely nanimba sy nangalatra.
May tamin'izany ny fiara iray, vaky ny fitaratry ny biraon'ny Filohan'ny Oniversité, nidiran'izy ireo ny biraon'y DAF, mpitam-bola, nisy nangalatra ny imprimante sy ny ordinateur, nopotehina ny birao.
Nanezaka ireto totakely ireto ny hanokatra ilay coffre-fort fa tsy nahavoavaha izany, nanezaka ny hibata izany hitondra azy hivoaka, fa navesatra loatra ka tsy zaka nobataina.
Niditra an-tsehatra ny mpitandro ny filaminana, ka voafehy omaly alina ihany ny toe-draharaha. Niandry ireo fitaovana sy ny toerana ny mpitandro ny filaminana alina, ary tonga ireo miaramila nanampy io maraina io.
Androany maraina dia nataon'ny mpitandro filaminana savahao ny Oniversité hitadiavana ireo imprimante sy ordinateur ary entana very ireo sy izay nahavanona izao fanimbana sy halatra izao.